Efa nisy io orinasa io hatramin'izay 1963 ary hatreto dia nahazo laza lehibe teo amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Noho ny fitomboan'ny lazany, ny orinasa dia manana mihoatra ny 1.000 mpiasa sy mihoatra ny 500.000 mpampiasa mavitrika.
Na dia manana traikefa manankarena, marika hita any Espana tamin'ny volana lasa. Eto amin'ny firenentsika, nankatoavin'ny talen'ny jeneraly jeneraly amin'ny filokana (DGOJ) ny faran'ny data, ka afaka matoky ny fiarovana amin'ny sehatra izahay. Ny lalao fanatanjahantena espaniola ary mahafinaritra kokoa ny any Paris noho ny vinavinan'ny afaka manamboatra Eurovision. Amin'ny fomba tsirairay, ny fifidianana ny hetsika sy ny fifaninanana dia lehibe kokoa noho ny salan'isa.
orinasa scandinavian, fa afaka mahita ny antsasaky ny taonjato iray tantara ianao, Iray amin'ireo Paris malaza sy manankarena indrindra izy ity, tsy azo tsinontsinoavina ny sehatra espaniola.. Ao anatin'ny famakafakana anay, mahita fialamboly hafa izahay Betsson.es sy fampiroboroboana nomanina ho anay. Ny valiny rehetra momba ny fanatanjahantena an-tserasera Paris dia hovaliana eto ambany.
Betsson ary PERU
Betsson manerantany mpitarika amin'ny sehatry ny fanatanjahantena any Paris dia nanapa-kevitra ny hiditra ao amin'ny tsena Peroviana 2008 ho an'ny fanatanjahantena ara-panatanjahantena an-tserasera amin'ny fipoahana Peroa any Paris, ankafiziny ao Paris.
Ao am-polony taona mahery izy io dia ho ao Peru, ireo isa ary nahavita nijanona teo amin'ireo mpilalao mpifidy tsara indrindra nanolotra ny fifanarahana sy fampiroboroboana tsara indrindra, bonus ary manolotra karazana lalao amin'ny Internet an-tserasera, toy ny doka an'arivony, blackjack ary velona roulette.
Ny fanavaozana ny votoaty isan-kerinandro ny Betsson Casino dia manolotra fampiroboroboana vaovao sy fifaninanana ara-panatanjahantena.
Betsson dia manome fampiroboroboana lehibe ho an'ny mpilalao vaovao ary hita foana amin'ny haino aman-jery rehetra, ao anatin'izany ny gazety, ny radio, TV, ankoatry ny nomena anarana ny mpilalao taloha sy ny kintan'ny baolina kitra Nolberto Solano ho ambasadaorony Però.
tolotra modalities atolotra: safidy amin'ny fanatanjahan-tena sy ny karazana paris
Namaritra izy ireo hoe “fanatanjahantena vaovao izay hanova ny fomba hahita ny lalao any Espaina” ary ny marina dia tsy hahita any amin'ny katalaola mihoatra noho ianao ianao 4.000 tsena. Ny filokana ny fanatanjahan-tena tianao indrindra dia tsy mora kokoa ary tsotra kokoa! Saingy tsy i Paris fanatanjahan-tena rehetra, eto isika koa afaka mifidy amin'ny politika, TV sy sarimihetsika na tranga malaza (toa an'i Eurovision, araka ny voalaza etsy ambony).
Mbola mihoatra noho ny 40 fanatanjahan-tena, baolina misy fiasa mazava, izay matetika miseho amin'ny alàlan'ny vavahadin'ireo antoko. Ary raha takian'ny besinimaro ny baolina kitra, Safidy hafa oh! Ao amin'ny lalao voalohany fizarana, Raha ny tokony ho izy dia mihoatra ny zato ny tombatombana samihafa amin'ny hetsika.. Arakaraka ny vokatry ny habetsaky ny fanaintainana azonao tratrarina akaiky 200 karazana paris.
Mikasika ny fizarana atiny ao amin'ny zoro havia miankavia, misy ny karohina momba ny hetsika. Miaraka amin'ny fahaizana mijanona ao Paris mandritra ny lalao, na fisehoan-javatra eo amin'ny fiainana aorian'ny fahafatesana na alohan'ny hisokafan'i Paris alohan'ny lalao.
Ao amin'ny tsanganana manaraka amin'ny modely andiany ary raha tsindrio azy, dia hahita tsanganana hafa iray amin'ny lisitr'ireo tsena ao ianao. farany, amin'ny lafiny ankavanan'ny efijery, misy coupon, miaraka amin'ireo safidy izay voamarika sy ny isa any Paris.
retreading, eto ianao afaka manao faminaniana momba ny fanatanjahan-tena: baolina kitra, baskety, volley, vodian-dranomandry, baolina, Formula 1, Golf, tenisy, handball ary maro hafa. I Paris no ligy malaza indrindra eran'izao tontolo izao toy ny Champions League, Tompondaka Tompondaka, Ligy Premier, NBA… Y, mazava ho azy, hetsika mivantana any Paris, araka ny nomanina. Jereo etsy ambany ho an'ilay lehilahy Paris any Betsson, tsirairay.
Betsson dia manome ny mpampiasa vaovao ny hampiditra avo roa heny hatrany amin'ny S / 300 ny $ 100 (bonus eksklusif ho an'ny mpilalao avy any Peroa), miorina amin'ny habetsaky ny tanky faharoa ihany koa, manolotra lalao maimaim-poana izay afaka ampiasaina ho an'ny betalan'ny baolina kitra tsara indrindra, Lalao tenisy sy ligy mihoatra ny fanatanjahan-tena tianao.
Mba hampahatezitra ny rohy dia tsy maintsy manana S ambany ianao / 30 ny 10 $, fampiasana iray amin'ireo fomba fandoavam-bola, PagoEffective PagoDirecto, MasterCard sy Visa.
Tsiahivina fa haverina alohan'ny fidirana ny filokana, tsy mametra vola hanangana indray ny bonus.
Mba hahazoana miendrika bonus dia tsy maintsy milalao ny sandan'ny bonus ianao ary milalao lalao lalao fanatanjahan-tena, Ny rafitra filokana any Paris sy ny POS dia mankasitraka ny bonus promosialy. Raha manapa-kevitra ny hisintaka ianao ary ny fepetra ahazoana ny mandray bonus na ny bonus dia ho nofoanana izany ary ny tombony azo avy amin'ny vidiny sy ny petra-bola dia ampiasaina mifanakalo.
Fepetra iray hafa dia enina isa eo ho eo, mitondra, ohatra, raha toa ny haavon'ny rohy S / 20 mandray S / 20 X 6 = S / 120 dia manan-kery, izany isa izany dia tokony hisafidy steeper 50 Ny bonus tamin'ny Janoary dia afaka nitaky ny fandresena farany.
Ireo fepetra rehetra ireo dia tsy maintsy arahana ao anatin'ny 30 andro mialoha ny fanonganana. Raha aorian'ny fotoana iray dia mbola ho foana ny vola bonus sisa.
Fiainana ao Paris
Avy amin'ny paris, ao anatin'izany ny fiainana mandritra ny fifandonana (tanjona, karatra, etc.), miaraka amin'ny fandaharam-potoana amin'ny fandaharam-potoana zava-dehibe. Raha atao fampitahana haingana eo amin'ireo andiany roa (karatra, ny zoro, famonoana tsy manjary, tifitra amin'ny tanjona, etc.).
Amin'ny lafiny ankavanan'ny sary dia mampiseho ny sehatry ny hetsika mifanentana toy ny fanafihana, nefa ny porofo tsy dia azo ampiasaina loatra.
Rehefa miditra amin'ny afovoan-tena amin'ny toerana tena izy ny tora-pasika raha mitohy ny lalao. Amin'ny fitambarany, ity fizarana ity dia tsy maharesy lahatra ny hafa ihany; raha oharina amin'ireo mpifaninana aminy, tsy ampy ny antontam-baovao eto.
Ho an'i William Hill tenany, Betfair y Bwin, azonao atao ny manaraka ny fandefasana mivantana ny hetsika sasany miaraka amin'ny sary amin'ny fahitalavitra.